ECKHART AKWOLKWỌ ​​AKWOLKWỌ
1948: Eckhart Tolle mụrụ Ulrich Leonard Tolle na Lunen, Germany.
1977: Tolle kwetara na ọ gụsịrị akwụkwọ na postgraduate na Mahadum Cambridge na London, ebe ọ gụsịrị akara na asụsụ na akụkọ ihe mere eme na Mahadum London.
1979: Tolle nwetara "ngbanwe nke ime," mgbe oge nke ịkpafu, biri na Vancouver, Canada wee malite ide akwụkwọ mbụ ya, Ike nke Ugbu a.
1997: Ike nke Ugbu a E bu ụzọ bipụtara ya.
2000: Onye onyonyo Oprah Winfrey kwadoro akwụkwọ ahụ, na-ekwupụta ya New York Times Akwụkwọ kacha mma maka akwụkwọ ndụmọdụ siri ike.
2005: Tolle bipụtara Newwa Ọhụrụ, nke ghọkwara onye kacha ere ahịa.
2008: Oprah hoputara akwukwo maka ulo akwukwo ya ma soro Tolle mekorita ya na usoro ihe omuma nke ntaneti na ntughari uche.
2009: Ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ nke Tolle mere atụmatụ na ha ruru iri nde.
A mụrụ Ulrich Leonard Tolle na Lunen, Germany. Akọwawo alụmdi na nwunye nne na nna ya dị ka njikọ na-enweghị obi ụtọ nke "nne nwere mmụọ siri ike na nna nna na-ede akụkọ" (MacQueen 2009). Ndị nne na nna Tolle gbara alụkwaghịm mgbe ọ dị afọ iri na atọ, na mgbe Tolle jụrụ ịga ụlọ akwụkwọ, nne ya zigara ya ka ya na nna ya biri na Spain. Tolle agaghị ụlọ akwụkwọ dị n'agbata afọ iri na atọ na iri abụọ na abụọ dịka nna ya kwere ka ọ mụọ nkà ihe ọmụma, asụsụ na akwụkwọ nke aka ya (Walker 2008). O mechara gụchaa akara na akụkọ ihe mere eme na asụsụ na Mahadum London wee debanye aha na doctoral mmemme na Mahadum Cambridge.
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ ndị 1970, Tolle bụ nwa akwụkwọ doctoral bi na London na nsogbu, "ụjọ, nso-igbu onwe ya" (MacQueen 2009). Tolle kọwara onwe ya dịka "nhụsianya 'enweghị m ike ibikọ onwe m ọzọ" (Grossman 2010). Ọgba aghara a kpalitere mkpughe dị adị maka Tolle n'otu mgbede. N'oge a, ọ na-ekwu, sị: “Na mberede, azụrụ m azụ, ọ dị m ka ọ bụ m bụ abụọ. 'M', na 'onwe' nke m na-enweghị ike ibi. Abụ m otu ma ọ bụ abụ m abụọ? Na na triggered m ka a koan…. Ọ mere m na mberede. Elere m ahịrịokwu ahụ anya: 'Enweghị m ike ịnọnyere onwe m'. Enweghị m azịza ọgụgụ isi. Onye ka m bu? Isnye bụ onye a nke m na-enweghị ike ibi? Azịza ya bịara n'ụzọ miri emi karị. Aghọtara m onye m bụ ”(Walker 2008). N'oge a na-agbanwe agbanwe Tolle na-akọghachi na ọ si "inwe nkụda mmụọ na isi nzuzu-isi nzuzu, m na-ekwu-na mberede inwe mmetụta nke udo na-akpata n'ọnọdụ ọ bụla…" (MacQueen 2009). Mgbanwe ahụ gụnyere “ọnwụ nke uche nke onwe nke dịrị ndụ site na njirimara, njirimara na akụkọ m, ihe ndị gbara m gburugburu, ụwa. Ihe bilitere n'oge ahụ nke bụ mmetụta nke ịdị omimi miri emi ma dịkwa omimi ma dị ndụ, ịdị adị. Emechara m kpọọ ya 'ọnụnọ' ”(Cohen nd). Ọ na-akọ na “N’ụtụtụ echi m tetara, ihe nile dịkwa n’udo. Udo di ebe ahu n'ihi na onweghi onwe. Naanị mmetụta nke ọnụnọ ma ọ bụ "ịdị adị", naanị ịlele ma lelee "(Scobie 2003).
N'adịghị afọ ojuju na agụmakwụkwọ n'ihi ihe ọ nwetara dị ka "mgbanwe dị n'ime ya," Tolled kwụsịrị na Cambridge mgbe otu afọ gụsịrị akwụkwọ Latin America. Ọ gbanwere aha ya site na Ulrich gaa Eckhart iji kwanyere onye German Neoplatanist nke narị afọ nke iri na anọ na ihe omimi ochie, Meister Eckhart. N'ime afọ abụọ sochirinụ Tolle biri na London na-ejide ọrụ nwa oge mgbe "ọ na-ehi ụra na sofas ndị enyi ya, na-anọ ụbọchị na bench ogige na Russell Square, ma ọ bụ na-abanye na British Library" (Burkeman 14). Ruo oge dị mkpirikpi ọ kụziri mkpụrụ nke mgbanwe onwe ya n'ụlọ ndị enyi ya, tupu ọ kwaga United States West Coast wee mechaa biri na Vancouver, Canada na 2009. Ọ bụ naanị afọ abụọ ka e mesịrị, na 1995, ka Tolle bipụtara akwụkwọ akụkọ ya akwukwo mbu, Ike nke Ugbu a, na-esote na 2003 site Ọnọdụ Na-ekwu Okwu na Newwa Ọhụrụ na 2005. Ewu ya rịrị elu soro Oprah Winfrey ji ịnụ ọkụ n’obi kwalite Ike nke Ugbu a na 2000.
Eckhart Tolle bụ onye azụmahịa na di na nwunye na Kim Eng. A mụrụ Eng na Vancouver, Canada wee zute Tolle na 1998 mgbe ọ gasịrị
gara otu n'ime nlọghachi ya. Eng ekwuola na tupu ya ezute Tolle ọ lụrụ nwanyị ma bụrụ Onye Kraịst, mana obi adịghị ya ụtọ na alụmdi na nwunye ya na okpukpe ya. N’ikpeazụ ọ hapụrụ ha abụọ wee malite ịchọ ime mmụọ. Ọ bụ mgbe ọ gara otu n'ime nlọghachi nke Tolle na ọ nwere bụ na ọ kọwara dị ka ahụmịhe nke mmụọ. Eng wee soro Tolle malite ọzụzụ afọ asaa, wee bụrụ onye ọlụlụ ma sonye n'ịkesa nkuzi ya. O mekwaala oru nke aka ya dika onye ndumodu na onye na ekwu okwu oha mmadu, a makwara ya ama kari na ulo akwukwo nke "Presence through Movement".
A na-akọwakarị nkuzi Tolle dị ka ngwakọta nke nkà ihe ọmụma ndị si Ọwụwa Anyanwụ dịka Zen Buddhist, New Age philosophy na okpukpe guzobere. Ọ na-ekwusi ike na nkuzi ya enweghị ihe ọhụụ kama ọ na-ekwupụta nghọta dị mkpa nke okpukperechi niile, nghọta nke furu efu na nkuzi ndị ọzọ nke okpukperechi ndị guzosiri ike. Tolle esitela na-enweta ezigbo ọdịiche dị n'etiti okpukperechi na ọnọdụ ime mmụọ; ebe ha abụọ nwere ike ibikọ ọnụ, "okpukperechi na-enweghị mmụọ, ọ dị nwute, ọ bụ ihe nkịtị" (MacQueen 2009). Ihe si na ya pụta bụ na okpukpe guzosiri ike aghọwo akụkụ nke ihe Tolle kpọrọ “ara” ahụ. N'echiche ya, a pụrụ iwere mmadụ dị ka "onye isi nzuzu, na obere oge dị obere," nke nwere “echiche aghụghọ na-adịghị ala ala, ikike nke igbu ọchụ na omume nke oke ime ihe ike na obi ọjọọ megide ndị ọ chere na ọ bụ ndị iro ya
. . . ” (MacQueen 2009).
Na nkuzi nke Tolle nsogbu mmadụ bụ isi bụ echiche onwe, ego, nke bụ ngwaahịa nke usoro a arụ ọrụ nke uche. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-abịa iji onwe ha tụnyere echiche ha, nke bụ ngwaahịa nke uche ha, yabụ na-ebi na nkewa. Dika o siri kwuo ya, “ezi obi anyị bụ Amamihe na-enweghị isi, nke bụ ịdị, nke bụ Chukwu. Anyị niile bụ Otu, yabụ anyị niile bụ Chukwu ”(Walker 2008). Maka Tolle, echiche nke Chukwu gafere eluigwe na ụwa enweghị enyemaka. Kama nke ahụ, Tolle ghọtara na e nwere ọgụgụ isi nke dị n'ụdị na ụdị ndụ ọ bụla na nke na -emepụta ma na-eweghachi eluigwe na ala mgbe niile. Ọ bụ unubẹ ndu knowszurẹlu; uche, site na iche na-arụ ọrụ na ndabere nke eziokwu, ikpe, onyonyo, kpọọ karịa kpọmkwem ahụmahụ. Na-arụ ọrụ na ndabere a, uche na-ebi na nchikota nke oge gara aga (ncheta) na ọdịnihu (amụma) karịa n'oge ahụ, nke Tolle na-ezo aka dị ka Ugbu a. Ebe ọ bụ na uche na-arụ ọrụ na ndabere nke ihe owuwu kama ịbụ ihe dị adị n'ezie, uche na-egbochi njikọta na ndị ọzọ na ịbụ. Uche a na achotakwa ya na eziokwu ebe obu na eziokwu nke ubochi obula adabaghi ​​n’onyonyo na nkpebi banyere uzo ihe kwesiri isi dabere na ncheta ihe gara aga na ochicho nke odinihu. Ọ bụ nguzogide a maka ihe bụ na enweghị njikọ nke ịdị adị na-eduga nhụjuanya na nhụjuanya nke onye ọ bụla. Nnukwu njirimara nke ndị mmadụ na uche ha, nke ka ukwuu na-eguzogide ihe bụ; na nnukwu iguzogide ihe kachasị ọkwa nhụjuanya na nhụjuanya. "Ahụ mgbu", ihe mgbu ahụ gbakọtara site na ahụmahụ ndị na-emerụ ahụ n'oge gara aga bụ ngwaahịa nke nguzogide a (McKinley 2008).
Ihe ngwọta nke nsogbu nkewapụ ịbụ ịbụ, na echiche Tolle, ga-adị ugbu a. Ugbu a bụ oge na-adịghị agafe agafe, nke bụ onye anyị bụ. N'adịghị ka mgbagha agbagha, anyị abụghị ihe na-eme ugbu a mana ohere maka ihe na-eme (Jonas-Simpson 2010). Nọ ugbu a pụtara ịnabata ihe dị na inyefe aka ugbu a. Ya mere, izere oge ugbu a bụ ara dị ka oge ugbu a bụ ndụ. Nakwere na ịtọgbọ na ugbu a na-enye mmadụ ohere ịmaliteghachi na ịbụ. Ihe achọrọ ịkwaga na ntụziaka a na echiche Tolle bụ edemede ime mmụọ, mgbanwe nke nsụhọ, nke ga-eme ka ụmụ mmadụ nwee ọganihu ka ha dị elu. Otu akụkụ dị mkpa nke usoro edemede a bụ ime ka ọnọdụ uche anyị dabere na mmụọ anyị na ibi ugbu a.
Tolle anaghị akọwapụta usoro iwu ọ bụla. Otú ọ dị, na Ike nke Ugbu a ọ na-atụ aro Eastern mmefu ntụgharị uche (ụdị ntụgharị uche nke na-adọta na ike ndụ na-ejikọ ahụ, uche na mmụọ) 10-15 nkeji ụbọchị ma na-etinye ntụgharị uche uche na ndụ ụbọchị. Dị ka Tolle si kwuo, nke a “na-amị mkpụrụ karịsịa ma ya na ndị ọzọ na-ekwurịta okwu ma na-agwa ihe e kere eke okwu. Site na ịnọgide na-amata nke a na-ekpugheghị n'ógbè nke gosipụtara, a na-ewu àkwà mmiri ma ọ bụ ọnụ ụzọ dị n'etiti abụọ "(Cole 2010). N'otu oge ahụ, Tolle yiri ka ọ na-ahụ erughị eru na ntụgharị uche. O kwuwo, “Ọ dị mma, n'oge ụfọdụ, omume nwere ike inye aka, mana anaghị m akụzi omume. Ike nke ọnụnọ adịghị ya mkpa. Ọnụnọ bụ nkuzi, ịdị jụụ na-akụzi, ya mere ọ ga-abụ ihe na-adịghị mkpa ịnweta omume. N'ezie, enwere ike ịnwe ụfọdụ ndị mmadụ na-enwebeghị oghere ọnụnọ ya ma adọtaghị ya; ya mere, omume ha nwere ike bụrụ ihe enyemaka na mbido-rue mgbe ọ bụrụ ihe mgbochi ”(Clurman 2001).
Tolle kwadoro usoro “omume” nke ndị na-eme ihe nwere ike iji rụọ ọrụ ka ọ bụrụ nke zuru oke na Ugbu a. Ndị a na-agụnye itinye uche zuru oke na ọrụ ọ bụla a na-eme kwa ụbọchị; ịa ntị na ọdịiche dị n'agbata echiche ndị uche na-eme, na-ekwe ka onye ahụ mee ka uche ya ghara ịmata ya ma mara ma ọ bụghị itinye aka n'echiche; ịdọrọ uche site na uche, na-eme ka uche mmadụ dị ugbu a site na ịmara iku ume, ma si otú a na-agba àmà ma na-enwe ahụmahụ; iji mmetuta na-ezighi ezi dika nkwalite iji nwekwuo ike; na-ahụ ma na-agbaze ahụ mgbu; na iwepụ uche site n'oge gara aga na nke ugbu a iji kpochapụ ego. Maka Tolle, iji uche mee ka ị mata bụ otu ihe kachasị mkpa na njem iji nweta nghọta.
Tolle egosiputa ndaputa banyere iguzobe ndi otu iwu ma obu ibu onye ozo. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe gbasara nkuzi ya ọ kwupụtara na "Ọ dị mkpa ka ọ pụta n'ụwa, mana mmadụ kwesịrị ịkpachara anya ka nzukọ a ghara ịchụ onwe ya" (MacQueen 2009). Otú ọ dị, o guzobewo ọtụtụ òtù maka ịgbasa ozizi ya. Ya na onye òtù ọlụlụ ya, Kim Eng, Tolle guzobere Eckhart Teachings. Nzukọ a na-achịkwa okwu Tolle, nkuzi na nlọghachi, yana ikikere, mbipụta na nkesa nke CDS na DVD ya. Weebụsaịtị Tolle, eckharttolle.com, awade nnukwu ngwaahịa ahịrị nke akwụkwọ Tolle, yana akụkụ nke ozi enwetaghachiri na egwu, kaadị, kalenda, CD na DVD. Na-atụgharị uche na nkuzi nke Eng Qi Flow Yoga video dịkwa. Na July, 2010 o guzobere Tolle TV, na-enye ndị na-ekiri ha ohere ịntanetị vidio nke Tolle na-atụgharị uche ma ọ bụ na-ezi ihe. Ndị ọbịa nwekwara ohere na-enweghị njedebe na mpaghara ịntanetị nke saịtị ahụ maka ego kwa ọnwa. ET-TV na-enye ndị nwere mmasị ụzọ dị ọnụ ala iji nweta nkuzi nke Tolle yana iru ụwa niile. Kim Eng na-ejekwa ozi n'ikike nkuzi; ọ bụ "onye nhazi nke Ọnụnọ site na nkuzi nkuzi, nke ọ na-esite na ntụgharị uche ya, yoga, t'ai chi, na omume ime mmụọ ndị ọzọ iji nye usoro ka ahaziri iche iji gosipụta nkuzi Eckhart" (Eckhart Tolle TV nd) . Enwere ihe karịrị narị abụọ Eckhart Tolle Meetup na ihe karịrị otu narị mba gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, Europe na Asia. Ọtụtụ iri puku ndị otu na-eji ebe ndị a atụle mkparịta ụka nke Tolle.
Enweela ike ịhụ Tolle site na mkpakọrịta ya na Oprah Winfrey. Na 2008, Oprah họrọ Newwa Ọhụrụ maka ulo akwukwo ya; ya na Tolle gbakọtara na izu iri nke nzukọ ọmụmụ ihe iji kwurịta isi nke akwụkwọ ahụ ma na-ebute ntụgharị uche. "Webinars" ndị a dọtara ọtụtụ nde ndị na-ekiri ya. A sụgharịrị akwụkwọ Tolle ugbu a n'asụsụ iri atọ na atọ, ma rere ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa (MacQueen 2009).
Tolle na-eche ihu nkatọ site n'aka ndị otu Kristi na-achọghị mgbanwe yana ndị isi akwụkwọ akụkọ. Otu ụzọ isi katọọ Ndị Kraịst na-achọghị mgbanwe bụ ihe Tolle kwuru na Jizọs adịghị mkpa dị ka ụzọ nzọpụta si: “Ndị na-akatọ okpukpe akpọọ ya Onye na-emegide Kraịst maka ịzọrọ na ị ga-azọpụta onwe gị, ọ nweghị Chukwu ma ọ bụ Jizọs chọrọ.” Dị ka Tolle si kwuo ya, “'Jizọs ọ bụ nwa Chineke?' Eeh. Ma gi onwe gi kwa. Just chọpụtabeghị ya '' (Grossman 2010). James Beverley, prọfesọ nke echiche na ụkpụrụ omume Ndị Kraịst, chịkọtara nkwupụta siri ike ndị Kraịst na-ekwu, sị: “Site n’echiche Ndị Kraịst, Tolle na-ekwuhie ihe ndị dị na Bible iji kwupụta njikọ ya dị iche nke Hindu, okpukpe Buddha na popu ọhụrụ,” ka ọ na-ekwu. "Ọ na-akọwahie nkuzi nke Jizọs banyere onwe ya ma na-eleghara nkwupụta doro anya nke Jizọs anya dịka Onye Nzọpụta, Onyenwe anyị na Ọkpara Chineke" (MacQueen 2009). Site na nke a, Tolle gọrọ isi ogidi nke Iso byzọ Kraịst site n'ikwu na ọdịghị ọdịiche dị n'etiti mmadụ na Jizọs na Chineke. Fọdụ ndị Kraịst ndị ọzọ nwere afọ ofufo n'ebe Tolle nọ. Onye prọfesọ nkà mmụta okpukpe John Stackhouse na Mahadum Regent evangelical dị na Vancouver ekwuola na ozizi Tolle nwere ike ịbara ọtụtụ ndị uru: “N’ezie [ọ] na-egbutu, na-adọbi ma na-emezighachi ibe ndị ahụ ọ na-agbazinye ego nke na ọ na-emesị bụrụ ihe na-adịghị mma n’ụzọ ime mmụọ nke ahụ nwere ike ime ka ihe masịrị gị ”(MacQueen 2009).
Tolle ezutewokwa ọtụtụ ndị na-akatọ ụwa na-ekwukarị oge ọhụụ na ụdị ọhụrụ ime mmụọ ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, Time Magazine zoro aka na akwukwo Tolle dika "awash in spiritual mumbo jumbo" (Sachs 2003). Dabere na otu nyocha nke nyocha ndị a: 'Ọbụna site n'ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ na-enyere onwe ha aka, Eckhart Tolle's A New Earth bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha,' ka otu onye na-enyocha akwụkwọ akụkọ kwuru. 'Oprah Winfrey nke na-acha ọla edo agbanwewo ihe na-esi ísì ụtọ ka ọ bụrụ onye kacha ere ahịa na Penguin.' Onye ọzọ kpochapụrụ akwụkwọ ahụ site na ịsị, 'peeji 313 ya bụ, n'ụzọ doro anya, na-agbagwoju anya - ngwakọta nke sayensị-sayensị, nkà mmụta ọhụụ Ọhụrụ na nkuzi sitere na okpukperechi guzobere' "(Walker 2008). Ma nkatọ okpukpe ma ọ bụ nke ụwa enwebeghị mmetụta dị ukwuu na ewu ewu na mmetụta Tolle. Na 2008, ndị New York Times zoro aka na Tolle dị ka onye edemede mmụọ kachasị ewu ewu na US, na 2011, Nyocha Watkins akpọ Tolle dị ka onye kasị nwee mmetụta n'ụzọ ime mmụọ n'ụwa.
Burkeman, Oliver. 2009. "The Àkwà Epiphany." The Guardian. 10 April 2009. Nweta site na http://www.guardian.co.uk/books/2009/apr/11/eckhart-tolle-interview-spirituality na March 21, 2012.
Clurman, Dan. 2001. "Eckhart Tolle Ajụjụ ọnụ." Na-ajụ Uche. Fall 2001. Nweta site na http://www.meditationblog.com/2007/03/01/eckhart-tolle-interview/, na Machị 30, 2012.
Cohen, Andrew. Nd “Ripples on the surface of being: An Interview with Eckhart Tolle.” Nd “Ripples on the surface of being: An Interview with Eckhart Tolle.” Nd. EnlightenNext Magazine. Nweta site na http://www.enlightennext.org/magazine/j18/tolle.asp?page=1, na Machị 21, 2012.
Cole, Josefine. 2010. "Otu esi atụgharị uche n'ike nke ugbu a." 21 March 2010. Nweta site na http://josefine-cole.suite101.com/how-to-meditate-with-the-power-of-now-a216121, na Machị 30, 2012.
Grossman, Cathy Lynn. 2010. "'Nzube Ndụ' Onye edemede bụ Eckhart Tolle bụ Serene, Ndị Nkatọ Nwere obere." USA Taa. 14 October 2010. Nweta site na http://www.usatoday.com/news/religion/2010-04-15-tolle15_CV_N.htm, na Machị 21, 2012.
MacQueen, Ken. 2009. “Eckhart Tolle vs. Chineke. ” MaClean si. 22 October 2009. Nweta site na http://www2.macleans.ca/2009/10/22/eckhart-tolle-vs-god/3/, na Machị 21, 2012.
McKinley, Jesse. 2008. "Amamihe nke afọ. Ugbu a agbanyeghị." New York Times. 23 March 2008. Nweta site na http://www.nytimes.com/2008/03/23/fashion/23tolle.html?_r=4&pagewanted=1, na Machị 21, 2012.
Sachs, Andrea. 2003. "Channeling Ram Dass." New York Times, 21 Eprel 2003. Nweta site na http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004693,00.html#ixzz1qnHPCVFp na April 15, 2012.
Scobie, Nwanyị Claire. 2003. “Gịnị Mere Ugbu a Ji Bụrụ Ihe Ọma?” Magazin Telegraph. 29 September 2003. Nweta site na http://www.theage.com.au/articles/2003/09/28/1064687666674.html na April 5, 2012.
Walker, Ether. 2008. "Eckhart Tolle: Nwoke a Pụrụ Changegbanwe Ndụ Gị." The Independent. 21 June 2008. Nweta site na http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/eckhart-tolle-this-man-could-change-your-life-850872.html, na Machị 21, 2012.